Umbono omangalisayo emazantsi emithambeka yokutyibilika - I-Airbnb
Umbono omangalisayo emazantsi emithambeka yokutyibilika
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguChloë Et Philippe
Igumbi elipholileyo kwaye lixhotyiswe ngokupheleleyo kwilali encinci yaseSwitzerland enomtsalane enendawo ekhethekileyo emazantsi ethambeka lokutyibilika. Ehlotyeni okanye ebusika imbonakalo iyamangalisa. Isantya esiphezulu i-wifi, i-tv, i-dvd, iincwadi kunye nemidlalo ziyafumaneka.Igumbi lokuhlala lijikelezwe yi-terrace efana ne-L apho unokufumana iglasi yewayini kunye ne-BBQ ehlotyeni. Ilali iseluxolweni kunye ne chalets ezintle zakudala.
Le flat ithokomeleyo ye-80 m2 yigem encinci. Ibekwe ngokukodwa kwindawo ephezulu yelali kunye nokufikelela ngokuthe ngqo kwi-funiculaire kunye ne-ski slopes, inombono omangalisayo kunye nokukhanya kwelanga okuninzi nasebusika. Ihonjiswe kakuhle, ixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye yonke into oyifunayo ukwenza ukuba ube ne-comrotable iya kufunyanwa. Ilali yaseSt Luc indala kwaye intle, abahlali banobuhlobo kwaye baluncedo. Indawo efanelekileyo yokuphumla, ukutyibiliza kunye nokuphefumla umoya omtsha.
4.81 · Izimvo eziyi-84
Ilali ethandekayo nenoxolo. Iichalets ezindala kunye eziqhelekileyo. Abantu abanobubele nabaluncedo. Indawo yokutyela egqwesileyo, i-nursery, ibha, iivenkile ezimbalwa kunye neendawo zokubhaka. Uhambo olulungelelanisiweyo kunye nemisebenzi. I-ski resort inezixhobo zanamhlanje. Amathambeka alungiselelwe abasaqalayo kunye nabatyibilizi abanezakhono. Izifundo zabucala nezeqela le-Ski zifumaneka ngootitshala abanamava abathetha iilwimi ezininzi. Kunqabile ukufola kule ndawo yeholide. Jonga le vidiyo ebonisa indawo ye-ski resort: https://www.youtube.com/watch?v=Q-o5zdaFGRE
Umbuki zindwendwe ngu- Chloë Et Philippe
Sifumaneka ngeposi okanye ngefowuni kwaye sinomntu wasekuhlaleni ohlala elalini ukuba kuyimfuneko.
Ulwazi lwabakhenkethi luyafumaneka unyaka wonke ngaphandle kukaMeyi noNovemba ngexesha lethu. Ziimephu kunye namaphecana olwazi kwiflethi ngeelwimi ezininzi.
Ulwazi lwabakhenkethi luyafumaneka unyaka wonke ngaphandle kukaMeyi noNovemb…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Saint-Luc